*Speak from My Heart*: January 2011
စောင့်ရှောက်အပ်သော ကိုယ်ကျင့် တရား အပိုင်း(၂)
Google မှရှာဖွေ ရယူပါသည်။
မြန်မာတွေ စာရိတ္တကောင်းပါတယ် . . . ဟိုးတုံးကဆို စကားပြော အတော်ယဉ်ကျေး ပါတယ်။
လူတိုင်းယဉ်ကျေးလားဆိုတော့ 98% ယဉ်ကျေးပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခါစလောက် ထိပါပဲ၊ ခန့် မှန်းခြေပြောတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ ကျမရဲ့ဖေဖေ ပြောတာကို နားထောင်ခဲ့ရဘူးလို့ ပါ။ ဖေဖေက သူတစ်ဖက်သားနှင့် စကားပြောရင် သူ့ ထက်ဘယ်လောက်ငယ်တဲ့ သူဖြစ်ပစေ ကျွန်တော်ကလေ နှင့် စပြောပါတယ်။ အထက်စီးလေသံနှင့် ပြောတာတစ်ခါမှ မကြားရဘူးပါဘူး။ သူငယ်ချင်းချင်းတောင် ယဉ်းနှီးမှူနှင့် သတိလက်လွတ် မင်းတွေ၊ ငါတွေနှင့် ပြောတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဘယ်ခောတ်ကလဲလို့ကိုအောင်ကမေးလာတဲ့ အတွက်၊ ကွန်မာန့် ကလဲ ရေးလို့ မရတဲ့အတွက် ပိုစ့်အသစ်လေး ရေးတင်လိုက်ပါတယ်။ နောက် အပတ်မှာလဲ ရွာကို အလည်ပြန်မှာမို့တစ်လလောက် ပျောက်မှာမို့စာကို ကြိုးစားပြီး များများတင်ခဲ့ဖို့ကြိုးစားပြီးရေးမယ်လို့ကြံနေပါတယ်။
ကျမ မမြင်လိုက်ရသော ဖေဖေဘက်က ကျမရဲ့ဘိုးဘိုးခောတ်က အကြောင်းလေး နည်းနည်းပြောပြပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဓါတ်ပုံတော့ အကြီးကြီးပဲ ဖေဖေကူးပြီး ချိတ်ထားတဲ့ အဘိုးပုံနှင့် အဘွားပုံ မှန်ဘောင်သွင်းထားတာတော့ မြင်ဘူးပါတယ်။ အဲဒါနှင့် ကျမလဲ ကျမ ဖေဖေနှင့် မေမေပုံကို ဖေဖေကို အတုခိုးပြီး ပုံကြီးချဲ့ ပြီး မှန်ဘောင်သွင်းထားတာ ခုတော့ ဘယ်ထားရမှန်း မသိသေးဘူး။ ဒါနှင့်ပဲ မေမေနေတဲ့ ကျမတို့ အိမ်လေးမှာပဲ သိမ်းထားရပါတယ်။ :P
ကျမရဲ့အဘိုးက ပုဂံက ရွားလေးတရွာမှာ ပြောရရင်တော့ ရွာသူဠေးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ အဲဒီခောတ်က သူခိုးတို့ ၊ ဒမြတို့ ဆိုတာရှိခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အလွန်နည်းပြီး၊ သစ္စာရှိကြပါသတဲ့။ စီးပွှားမရှာတတ်လို့ ၊ ရင်းနှီးဘို့ ရာ မတတ်နိုင်လို့ သာ ခိုးစားတာ၊ အမြဲခိုးနေတာတော့ မဟုပ်ပါဘူးတဲ့။
သခိုးတို့ ၊ ဒမြတို့ ဆိုတာ ကမ္ဘာဦးကတော့မရှိခဲ့ဘူး ဟီး ဟီး . . .၊ ပြီး ကမ္ဘာဦးလူသားတွေက နတ်တွေထက်တောင် သက်တန်းရှည်သေး၊ နူးညံ့တဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာလည်းရှိကြလို့ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာ လမ်းရှောက်နေကြတာ မဟုပ်ပါဘူး။ ဈန်နဲ့ ပဲ သွား၊ လာကြသေးတာပါ။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးလဲ ချစ်ခင်လိုက်တာဆိုတာ ဗြမ္မဆို တရားတွေနှင့်ပဲ နေထိုင်ကြပါသတဲ့။ စားစရာလဲမလိုသေးပါဘူးတဲ့။ ပိတိကို တကယ်စားသုံးတဲ့ သူတွေပါ။ ဒါကြောင့် ယောက်ျား၊ မိန်းမရာယ်လဲ အင်္ဂါ အချိုးအစား မဖွံ့ ဖြိုးသေးပါဘူး။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အစားမစားတော့ စွန့် စရာ အညစ်အကြေးလဲ မရှိ၊ ကိုယ်ခန္ဒာကလဲ ခုခောတ်လူတွေလို ရေမွှေးဆွတ် စရာ၊ အကူမလိုပါဘူး။ သန့် ရှင်းစင်ကြယ်ကြပုံ တွေပါ။
ဒါပေမယ့် ခုဆို ဒီကမ္ဘာဟာ ဘုရား လေးဆူတောင်ပွင့်ပြီးပြီး ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။ ဘုရားတစ်ဆူးပွင့်ထွန်းလိုက် ဆိုဆုံးမတွေနှင့် နေလာလိုက်ကြနဲ့ ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တချို့ ဝေးလံ ခေါင်သီတဲ့ အရပ်တွေ မှာဆိုရင်တော့ ဘိုးဘိုးတို့ လက်ထက်ထိတောင် တံခါးရွတ်တွေ ပိတ်ပြီ ရန်ကုန်မှာလို တချိန်လုံး သော့ပိတ် နေစရာ မလိုပါဘူးတဲ့ ရှင်။
ကျမရဲ့ အဘိုးကလဲ ရွာမှာ မရှိတဲ့သူတွေကို အဆင်ပြေသလို့ပေးကမ်းလာတဲ့သူ တစ်ယောက်ပေါ့။ မိဘတွေကချမ်းသားတယ်၊ အဘိုးလက်ထပ်မှာလဲ ချမ်းသာတယ်။ ပြီးအဘိုးကလဲ တစ်ဦးတည်းသောသားဖြစ်ပြန် (ဆိုလိုတာက မွေးခြင်းကို မရှိတာပါ) ဆိုတော့ တတ်လည်း တတ်နိုင်တာလည်းပါပါတယ်။
ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ သူမှရယ်မဟုပ်ဘူး။ လူတွေကို သူနေရာနှင့်သူ အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံရမယ်လို့ တောင် သား၊ သမီးတွေကို ဆုံးမပါသတဲ့။ အဲလို ပေးကမ်း စောင့်ရှောက်လာတဲ့ အထဲမှာ သူခိုးခိုးလို့အဖမ်းခံရတဲ့ သူတွေရဲ့ မိန်းမ၊ မိသားစုတွေကိုလဲ ငွေပေးပြီး ခိုင်းစရာရှိတဲ့ အခါခိုင်း၊ ပေးတဲ့အခါပေးပါသတဲ့။ ကိုယ်လယ်မှာ လုပ်တဲ့သူလဲ ဒီလိုပါပဲ ပေးစရာရှိပေး၊ ကြွေးစရာရှိ ကြွေးပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ခောတ်နှင့် ဂျပန်ခောတ်အကူးမှာ ခောတ်ပျက်ဖြစ်လေတော့ ဒမြ အလွန်တိုက်တဲ့ ကာလမှာ အဘိုးက ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ ဘယ်နေမလဲ ဒမြတွေက တိုက်ဖို့ လုပ်တာပါပဲ။ အဲဒီခောတ်က ပိုက်ဆံလေး၊ ရွှေလေးရှိရင်ကိုပဲ ဓာတ်သိတွေကကြံလို့ဒမြတိုက်ခံလွတ်တဲ့ သူဠေးမရှိ သလောက်ပေါ့။ ဒါကြောင့်လဲ ခောတ်ပြက်သူဠေးတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒမြတိုက်လို့ချမ်းသာလာတဲ့ သူဠေးတွေပါ။ လက်နက်ကလဲ လူတွေကြားမှာ လွယ်လွယ်ရှိနေတာပါ။ သေနပ်ကိုင်ရတဲ့ သူတွေ လဲပါတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဘိုးဘိုးကတော့ အမြဲလွတ်သတဲ့။ သူကျေးဇူးပြုထာတဲ့ သူတွေက သူတို့ သိတဲ့အတိုင်း ဒီညတော့ ဒမြတွေ ဘိုးဘိုးကိုလာတိုက်လိမ့်မယ် စောစောရှောင်နေပါလို့ကြိုပြီး သတင်းပေးရင် ရွာကနေရှောင်နေလိုက်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်တော့မှ ဒမြက တိုက်ခွင့် မကြုံလိုက်ပါဘူး။
အဲဒီတော့ မဝေးလှတဲ့ နှစ် ၁၂၀ လောက်က ပေါ့နော်။ ဒါတောင် တောင်တန်းဒေသတွေမှာ တော့ ကျမပြောခဲ့ ပြီသလိုပဲ ပစ္စည်းထားခဲ့ရင် လက်ရာမပျက် ပြန်တွေ့ ရတာဟာ မဝေးလှတဲ့ ၁၀နှစ် ၁၂ နှစ်ကကို ကျမ ကျောင်းပြီး Field ဆင်းခဲ့တဲ့ ယောဒေသမှာ ကျန်ရှိနေတုံးပါ။ အဲဒီ အရပ်ဒေသက ကျမတို့ကျောင်းဆင်းသူငယ်ချင်းကပဲ ပြောပြတာပါ။ သူတို့ ဒေသမှာ အရင်ကဆို ပစ္စည်းထားခဲ့ရင် ဘယ်တော့မှ မပျောက်ဘူးတဲ့။ မီးရထားလမ်း ဖောက်လိုက်တော့ မီးရထားဖောက်တဲ့သူတွေ ရောက်လာမှ ပစ္စည်းတွေ ထားခဲ့လို့ မရဘူး၊ မကြာခဏပြောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟီးကျမက အဲဒီဠါနက လူတွေယူတယ်လို မဆိုလိုပါ။ မီးရထားလမ်းဖောက်တော့ ကန်ထရိုက်တွေ နယ်စုံက၊ လူစုံတွေလာကြရာကနေ စာရိတ္တ နည်းနည်းပျက်လာတာလား၊ ဘာလား … ညာလားပေါ့။ :D
ခုနေခါဆို အဲလိုဘယ်ပြောနေလိပ် မလဲ။ ကြုံရင်စားပြီ ကျေးဇူးတင်ရမှန်း မသိသူတွေက အများသား မို့ လား။ ကျေးဇူးရှိတဲ့သူကလဲ သူ့ ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုပြီ နင့်ပဲငဆ ပြောသလား၊ ကျေးဇူးပြုခံရသူကပဲ ကျေးဇူးကန်းသလား ဆို တာ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေပါတယ်။
အမှန်ကတော့ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး လေးစားမူလေးတွေနှင့် ဆက်ဆံကြမယ်၊ သူ့ စည်း၊ ကိုယ့်စည်းလေးတွေလဲ ရှိမယ်ဆိုရင် ရန်သူဆိုတာနည်းသွာမယ်။ ခုခောတ်ခါလို တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် စိတ်မချလို့အပြိုင်အဆိုင် လက်နက်တွေ တီထွင်နေစရာလဲ မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ ကမ္ဘာစစ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ ဝေါဟာရလေးဖြစ်လာမယ်မို့ လားရှင် ။ ။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 12:37 AM
စောင့်ရှောက်အပ်သော ကိုယ်ကျင့် တရား
ပျင်းပျင်းနဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရင်း သတင်းဖွင့် နားထောင်တုံးမှာ ဖိလစ်ပိုင်သမတ္တအသစ်က Correction တွေနှင့် နဘမ်းလုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့ စာကြောင်းလေးကြားလိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဟိုတုံးကဆို သူခိုးဆိုတာတောင် မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနှင့် အညီနေထိုင်ခဲ့ကြတာမို့ ပါတဲ့။
စာတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးခဲ့တာတွေပြောရရင် တရုပ်ပြည်ထဲက ကုန်သည်တစ်ယောက်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ကုန်ကူးဖို့ ရန် အတွက် ဒေသထဲက နယ်ခံလူတွေကို လုံခြူံရေးအတွက်ငှါးပြီ မြင်းနဲ့ကုန်းကြောင်းကနေ ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသတဲ့။
လူစုနဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆိုတော့ လမ်းမှာ ဇရပ်တစ်ခုမှာ ညအိပ်တည်းခိုပြီမှ လိုရာကို ခရီးဆက်ရပါသတဲ့။
ဟိုးတုံးက ရွားထိပ်တွေ၊ အလှမ်းဝေးတဲ့ ရွာနှစ်ရွာကြားလမ်းဆုံးတွေမှာ ဇရပ်တွေကို အလှူသဘောမျိုး၊ ဒါမှမဟုပ် ရွာတွေကစုလို့သွားရေအဆင်ပြေအောင်စီမံထားလေ့ရှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဇရပ်တွေမှာ ဒီလိုပဲ ခရီးသွားတွေ ညရေး၊ညတာ ခရီးသွားရင် တည်းခိုလေ့ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက်ကျတော့ ပစ္စည်းတွေပြင်လို့တရုတ်ကုန်သည်ဟာ ခရီးဆက်လာတာ ခရီအတော်လှမ်းမှ ငွေထုပ် ဇရပ်ပေါ်မှာကျန်ရစ်တာ သတိရတယ်။ ဒါနဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်ငှါးလာတဲ့ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိုပြောလို့ပြန်ယူဖိုပြင်ခိုင်းပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ကလဲ ဘယ်အရပ်မှာကျန်ခဲ့သလဲ မေးတယ်။ တည်းခိုတဲ့ ဇရပ်မှာကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတော့ ပြန်မယူဖို့ ပြောပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေရောင်းရေး ဝယ်တာပြီမှ အပြန်လမ်းမှပဲ ယူဖို့ပါ။ ဒီအရပ်က ပစ္စည်းမပျောက်ပါဘူး ဆိုတဲ့ အတွက်ကုန်သည်လည်း ရှေ့ ပဲခရီး ဆက်ခဲ့ရတယ်။
အရောင်း၊ အဝယ်ပြီးလို့ပြန်လာတဲ့ထိ ကုန်သည်မှာ ပူပန်စိတ်နဲ့ပြန်သာလာခဲ့ရတယ် သူပစ္စည်း ပြန်တွေ့ ဖို့ ရင်ပူနေခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်ထဲက တရုတ်ပြည်မှာ အမည်ခံ ဗုဓ္ဒဘာသာ သာရှိတော့ ပါတယ်။ ဘုရားအဆုံးအမနှင့် ဝေးခဲ့ပြီး၊ သူခိုး၊ ဒမြတွေ ပေါရာအရပ်ဖြစ်နေတော့ စိတ်ကတော့ ပစ္စည်းမပျောက် တာကို ယုံဟန်မတူပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဇရပ်ကို ပြန်ရောက်တဲ့ အခါမှာ သူ့ ငွေအိပ်ဟာ သူမေ့ကျန်နေတဲ့ အတိုင်းလက်ရာ၊ ခြေရာ မပျက်ပဲ ပုံမပျက်တွေ့ လိုက်ရသတဲ့။ ဟိုးတုံးက ခရီးသွားရင် တစ်လ၊ ကိုးသီတင်းကြာအောင်သွားရတာပါ။ တစ်လလောက်ကြာမှ ပြန်လာတာတောင် မပျောက်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပစ္စည်းမဟုပ်ရင် လက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်ဖို့ ထား စိတ်နဲ့ ပြစ်မှားခြင်းမရှိကြဘူတဲ့။ ဒါဟာ တရုတ်ပြည်က ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေက ထွက်လာတဲ့ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ။
ဦးဂိုအင်ဂါပြောပြခဲ့တယ်လို့ ထင်တာပါပဲ၊ ဘယ်မှာဖတ်ဖူးတယ်ဆိုတာတော့ မေ့သွားပါပြီ။ သူ့ ရဲ့ အဖိုးကလဲ ဗမာပြည်ကို ကုန်းကူးဖို့ လာခဲ့ဘူပါတယ်တဲ့။ သူ့ ရဲ့ ပစ္စည်းတွေလဲ အဲလိုပဲ မပျောက်ခဲ့ဘူး ဘူဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင် သူ့သား၊သမီးတွေကိုလဲ ဗမာပြည်ရဲ့သီလလုံးခြုံးပုံ၊ သူခိုး၊ ဒမြနည်းခဲ့ပုံ ဘယ်လို နေထိုင်ကောင်းတဲ့ အခြေချနေထိုင်သင့်တဲ့ အရပ်ဖြစ်ပုံကို ပြောပြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပါတယ်။
ရှင်ဘုရင်တွေ လက်ထက်မှာတုံးက ကြက်ဥတောင် အသက်ရှိလို့စားသုံးခြင်မရှိခဲ့ပုံ၊ အင်္ဂလိပ်တွေ မြန်မာမြေကို အခြေချလာမှာသာ ခောတ်မှီတယ်လို့အမြင်မှားကာ အားရှိအောင် ကြက်ဥစားသုံးရာက နောက်ပိုင်းမှာ ဒါဟာ သူ့ အသက်သက်တဲ့ အထဲပါတာကို မေ့လျှော့လာတာပါ။
သီလအခြေခံလျှော့လာတာနှင့် အမျှ ရောဂါတွေပေါလို့ ၊ သက်တန်းလဲတိုလာကြပါတယ်။ သစ္စာတရား ထွန်းကာတုံးက ဆေးဖက်ဝင်ခဲ့ကြတဲ့ နွယ်၊မြက်၊ သစ်ပင်တွေသည်ပင်လျှင် ခုတော့ ဝေဒနာပျောက်ကင်းအောင်း မစွမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ လူကျင့်ဝတ်လို့ဆိုအပ်တဲ့ (၅)ပါးသီလမှာ လူတို့စောင့်ရှောက်သော သီလ ဘယ်နှစ်ပါး ကျန်ပါလိပ်အုံးမလဲ မသိတော့ပါ။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 10:57 PM
ဒီဇင်ဘာလ ဆိုရင်ရပ်ကွပ်တိုင်းမှာ ပြေးခုန်ပစ် အားကစားပွဲတွေ ကျင်းပလေ့ရှိတယ်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ မှာတော့ မြို့ နယ်အဆင့် ပြိုင်ပွဲးတွေ ကျင်းပလေ့ ရှိတဲ့ ကျမရဲ့မြို့ ကလေးအကြောင်းပါပဲ။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျမကလဲ ငယ်ငယ်က ရပ်ကွပ်ပွဲးတွေမှာ ပါဝင်ယဉ်ပြိုင်ခဲ့သူ အားကစားမယ် တဦးပေကိုး . . . ။ ဒီလိုရေးလိုက်လို့ တော့ တမျိုးတွေ ထင်ကုန်တော့ မှာပဲ ။ အပျော်တန်း ရပ်ကွတ် အားကစား ပြိုင်ပွဲဝင် အဆင့်ပါ။ ခုတော့ ပြေးဖို့ ထား မြန်မြန် လမ်းလျှောက်တာတောင် မောနေပြီလို့ထင်တာပဲ။
ဒုတိယ အစမ်းစာမေးပွဲးပြီးလို့ကျောင်းကလဲ ၁၀-ရက်လောက်ပိတ်ထားပြန်၊ အေးတဲ့ရာသီလဲ ဖြစ်ပြန် ဆိုတော့ ကလေးသဘာဝ အိမ်ထဲမှာတောင်နေတာ မဟုပ်ပါဘူး။ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်က ကလေး ကြီး၊ သေး ရွယ်စုံးနှင့် နေ့ တမျိုး၊ ညတဖုံ ရိုးတယ်ကိုး မရှိပါဘူး :P ဆော့ကြတာ ဗြောင်ကိုဆန်နေတာပါပဲ။ ခုတော့ ကျမတို့အိမ်ရှေ့ တလျှောက်က မြေနေရာလေးမှ ညဘက်ရောင်း တဲ့ဈေးဆိုင်လေးတွေနှင့် ကစားကြမဲ့ ကလေးတွေကလဲး မတိုးပွှားလာပဲ ဟိုဟို ဒီဒီ ပြောင်းလို့အသွင်သစ်တွေ ပြောင်းကုန်ပါပြီ။
ဒီလို့သောင်းကျန်နေတဲ့ ကလေးတွေပဲ လေ။ ဒါတောင် ရပ်ကွတ်အားကစားပွဲးတွေ လုပ်တယ် ပြိုင်လို့ ရတယ်ဆိုတာ မသိသေးပါဘူး၊ ကလေးကို။ ရပ်ကွတ်ထဲက ဖေဖေနှင့်လဲ အလုပ်မှာ သိကျွမ်းတဲ့ ဦးရွှေဝင်းက ကျမကို ကစားဖို့ လာခေါ်ပါတယ်။ သူပဲ နံမည်စာရင်းပေးတော့ အရပ်တွေတိုင်းပြီးတော့ ကလေးတွေကို အုပ်စုခွဲးပါတယ်။ အင်း ဒီနေရာတော့ ကျမမှတ်မိတာက မှားသွားပြီလားမသိဘူး။ အရပ်တိုင်းတာ မှန်ပေမယ့် အုပ်စုကတော့ အသက်နှင့်ပဲ ခွဲးတာပါ။ ဟုပ်တယ် ဟုပ်တယ်။
ကျမ စဆော့တဲ့ အရွယ်မှာ ထိုင်ခုံလုပွဲးပါတယ်။ ထိုင်ခုံတွေချပြီး ဘယ်နနှစ်ကလေးတွေ လာလို့လော်စပိကာနဲ့အော်လိုက်တော့ ကလေးတွေ သွားစုတယ် ထိုင်ခုံဘေးမှာ။ ဝီစီမှုတ်ရင် ထိုင်ခုံပတ်ပြေး လို့မှာထားတယ်။ ကိုကလဲ
စပြိုင်ဘူးတာ ပထမဆုံးလေ အူလည်လည်နဲ့ဝီစီသံဆုံးတော့ နီးရာသူများတွေထိုင်လို့ကိုလဲ အစပိုင်းကတော့ ဟုပ်တိ၊ ပတ်တိ ထိုင်ခုံရသေးတယ်။ ထိုင်ခုံ ကတဖြည်းဖြည်း လျှော့လာတာ နှစ်လုံးလဲကျန်ရော (အဲတာဒိုင် ပေါ်လဲ မူတည်တယ်) သူမုတ်တဲ့ 
အချိန်မှာ ကိုက ထိုင်ခုံရှေ့ မှာ မဟုပ်တော့ ကျန်တဲ့ရှေ့ ရောက်နေတဲ့ကလေးက ဝင်ထိုင်ရော။ ဘယ်ခုံထိုင်ရမှန်း မသိဘူး၊ ယောင်လည် ယောင်လည်နဲ့ ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတော့မှ မေမေက လာဆွဲးခေါ်ရတယ်။ နှစ်ယောက်မှာ တစ်ရတဲ့သူအတွက်
ဆက်ပြိုင်ရဦးမှာကိုး။ ခုတော့ တခြားကလေးတွေ ဖြစ်နေရင် ရီခြင်တယ်။
နောက်ပွဲးက ဝက်မျက်လုံးထိုးပွဲး။ ပွဲစဉ်တွေတော့ ရှေ၊့နောက်တွေ မှတ်မိတော့ပါဘူး။
အဲတာတော့ သူတို့ ဘယ်လိုရွေးတယ်၊ သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာ ခုချိန်ထိ ရေးတေးတေးပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါလဲ တတိယပဲ။ မီတာ ၅၀ အပြေးပြိုင်ပွဲးတော့ ဒုတိယရတယ်လို့မှတ်မိတယ်။
နောက်နှစ်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ သွားပြိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ အရွယ်ပြောင်းသွားတော့ ကစားနည်းတွေလဲ ပြောင်းပြီးဆော့ရတယ်။ ကြက်ဥဇွန်းကိုက်လို ပြိုင်ပွဲးကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်ထဲ ဇွန်းထဲက ကျောက်ဒိုးလေးကို ငြိမ်အောင် ကိုက်ပြီး ပန်းတိုင်ကိုသွားရတယ်၊ အားလူကောက်လဲပဲ တစ်ယောက်ထဲ တာထွက်မှာ ချထားတဲ့ ခြင်းတောင်းထဲကို အားလူးတွေကို နီးရာကနေ ဝေးသွားတဲ့ထိကောက် ပြည့်သွားရင် တောင်ကိုမပြီး ပန်းဝင်အောင်းပြေးရတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ တစ်ယောက်ထဲ ပြိုင်လို့ ရပေမယ့် ၊ အပ်ချည်နဲ့အပ်ထိုးတာတို့ကျတော့ တစ်ယောက်ကကိုင် တစ်ယောက်က ပန်းတိုင်ကနေ ပြေးလာပြီး အပ်ချည်ထဲ့၊ ထဲ့လို့ ရသွားရင် အပ်ကိုင်ထားတဲ့ သူကယူပြီး ပန်းတိုင်ထိပြေးရတယ်။ ဒီလို ပွဲးလေးတွေကြတော့ ဘက်ကောင်းရဖို့လိုတယ်။ ဒါကတော့ ကံအတိုင်းပဲ အဆင်ပြေသလို ရွေးပြီး တွဲလိုက်တာဆိုတော့။
ဒီကစားနည်းလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ကိုလက်လုတ်ရှားမှု့ ကိုတင် အားပေးတာ မဟုပ်ပါဘူး။ ယှဉ်ပြိုင်မှု့ တွေ၊ ပူပေါင်းဆောင်ရွတ်မှုတွေ ပါလာပါတယ်။ ဒီထဲ မကောင်းတာ တစ်ခုကလည်း ဘာလဲ ဆိုတော့ ဒိုင်တွေဘက်လိုက်ရင် ကလေးတွေပါ မကတော့ဘူး လူကြီးတွေပါ စောင်လာတယ်။ ဘာမှတော့လဲ မဟုပ်ပါဘူး။ ကိုယ်နိုင်တဲ့ အဆင့် အလိုက်တော့ ကောက်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးကို ဆုချတာပါပဲ။ မုန့် ဖိုးရတာပေါ့။ ဒါကလဲ ကလေးဆိုတော့ များပါတယ်။ ပထမဆိုရင် ၃၀ကျပ်၊ ဒုတိယက ၂၅ကျပ်၊ တတိယဆိုရင်တော့ ၂၀ကျပ် လောက်ရတယ်လို့ရေးရးပဲ မှတ်မိတယ်။ အဲလိုဆိုတော့လဲ များသင့် သလောက်များမှာပေါ့နော်။ ကျမတို့ ရတဲ့မုန့် ဖိုးက အဲဒီတုံးက တမတ်၊ ငါးမူးပဲ သုံးရသေးတာကိုး။ (၂၅ ပြား၊ ပြား၅၀ ကိုပြောတာပါ၊ ခုခောတ်က အကြွေကို မမြင်ဘူးလောက်တော့ဘူး။)
ဒါက မိန်းကလေးတွေ ကစားရတာ။ ယောက်ကျားလေးတွေလဲ အသက်အရွယ်ခွဲးလို့ကစားနည်းတွေ ကွဲးကြတယ်။ ဂုံနည်းအိတ်စွပ်ပြေးတာ၊ ပူပေါင်းဖောက်ပြိုင်တာ၊ ဒါပေမယ့် အားလုံးတူတဲ့ ကစားနည်းကတော့ အပြေးပြိုင်ရတာပါပဲ။ အရွယ်လိုက်လို့ တော့ ပြေးရတဲ့ အကွာအဝေးက ကွာသွားတာပေါ့။ လူကြီးပိုင်းတွေ ဆိုရင် ရပ်ကွတ်ပတ်ပြေးရတယ်။ မှတ်မိနေတာ တစ်ခုကတော့ ရပ်ကွတ်ပြိုင်ပွဲးက လူတစ်ယောက် ပြေးနေရင်းပန်းဝင် လာပြီးတော့မှ ကြွတ်ကျောတက်တာကို ပထမဆုံး စမြင်ဘူးသွားပါတယ်။ ဟီး စပ်စုတာပါ မသိလို့ ၊ သူကတော့ တော်တော်ခံစား နေရတာပါပဲ။ ကြည့်ပြီးတော့ စိတ်တောင်မကောင်းပါဘူး။
မြို့ နယ်အဆင့်မှာတော့ ပြေး၊ ခုန်၊ ပစ် ဆိုတဲ့အတိုင်း စုံပါတယ်။ ခေါင်းဦးနဲ့တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ထုတာ၊ အစားပြိုင်၊ အမြင့်ခုန်၊ လှံတံပစ်၊ သံလုံး၊ သံပြားတွေ ပစ်တာမမြင်ဘူးတာတွေ အစုံပါတာပေါ့. နတ်ကရာ ကြည့်မောရတာပါပဲ။ ကလေးဆိုတာ လောကထဲ အသစ်ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်လေးတွေ မုတ်လား။
အဲလိုပဲ အလုပ်သမားနေ့ နှင့် ပတ်သတ်တဲ့ ပွဲးလမ်းမျိုးတွေလည်း တွေ့ ရဘူးပါတယ်။ ကျမတို့ မြို့ က အလုပ်သမားမြို့ တော်ကိုး ။ လူတွေက အသစ်တွေရောက်လာလိုက်၊ သိကျွမ်းပြီးသား လူဟောင်းတွေက တနယ်၊တကျေး ပြောင်းသွားလိုက်နဲ့ဆိုတော့ မြို့ သူ၊မြို့ သားတွေကလည်း အချိန်တန် အရွယ်ရောက်လို့အလုပ်ခွင် တွေထဲဝင် မိဘတွေနဲ့ ခွဲး၊ မွေးရပ်မြေလေးနဲ့ လည်းကွဲးကွာလို့တွေ့ ၊ ကြုံ၊ စုံ၊ ကွဲး ရတာဟာ ဓမ်မသဘောတရားနှင့် အညီပါပဲလေ။
သတ္တဝါတွေဟာ ဖြစ်လေရာဘဝ၊ ရောက်လေရာ အရပ်မှာ ပျော်ကြတာပဲလို့ဘုရားဟောလေး ရှိသားပဲ။ ဘုန်းကြီးတွေဟောတာ နာရဘူးတာကတော့ . . . . .
:D တခါက နတ်ပြည်မှာ နတ်သား နှစ်ပါးအတူရှိနေတုံး နတ်သားတပါးက နတ်ဝတ် တန်ဆာတွေ ငြိုးလာတော့ သူစုတေရတော့မယ်လို့သိသတဲ့။ ဒါနဲ့သူဒီကစုတေရင် ဘယ်ဘဝမှာ ဝင်စားမလဲလို့နတ်မျက်လုံးနှင့် စူးစမ်းလိုက်တော့ နွားချေးပိုးထိုးကောင် ဘဝရောက်ရမှာကို မြင်သတဲ့။ ဒါနှင့် သူလဲရှက်လွန်းလို့သူ့သူငယ်ချင်းကို သူငယ်ချင်းရေ ငါများ ဒီဘဝရောက်ခဲ့ရင် ငါ့ကို လာလို့ သတိပေးပါကွယ်။ သူက အဲဒီဘဝမှာ တစ္စက္ကန့် လေးတောင် မနေပါရစေနှင့်လို့ပြောပြီး စုတေသတဲ့။ ဒါနဲ့သူငယ်ချင်ဖြစ်သူကလဲ သူ့ သူငယ်ချင်းမတွေ့ ရတော့မှ ဒိဗ္ဗစက္ကူဥဏ်နှင့် ဆင်ခြင်လို့ ရှာလိုက်တာ တစ်ခုသော နွားခြေပုံထဲမှာ သွားတွေ့ တယ်ဆိုရင်ပဲ နတ်ပြည်ကနေ သူငယ်ချင်းရှိရာအရပ်ကို အာရုံပြုလို့သတိပေးသတဲ့။
တော် တော်နဲ့ထွက်မလာတော့မှ နွားချေးပုံဝလောက်ကနေ အသံပြုသတဲ့ (အသံပေါ်လာအောင် လုတ်တယ်လို ယူဆရတာပဲ) အဲဒီတော့မှ ချေးပုံထဲက တက်လာပြီး ပြောဆိုပဲ။ သူငယ်ချင်းရေ ငါဒီမှာ နွားချေးပိုးထိုးမလေးနဲ့ ပျော်နေလို့အချိန်တောင် မအားပါဘူးလို့ပြောပြောဆိုဆို ချေးပုံထဲကို စွပ် ဆိုပြီး ခုန်ဆင်းသွားပါရောတဲ့. . . ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်။
ဒါကြောင့် ဘဝမှာ ဒီလိုပဲ ပျော်လည်းနေ၊ မပျော်လည်းနေ မပြိုင်ခြင်လဲမရ၊ ပြိုင်ခြင်လဲ မရတဲ့ ဘဝတွေကို ဆက်လတ်ချည်တက်နေကြရဦးမှာပါလို့နီဂုံးချုပ် လိုက်ပါရစေနော်။
ပုံများကို Google မှ ရှာ၍ ရယူပါသည်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 12:19 AM
ကျမငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ရသော ရုပ်ရှင်များ
ကျမတို့ မိသားစု နေတဲ့ အိမ်လေးဟာ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် လွန်စွာမှ နီးပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကတော့ ရုပ်ရှင် မကြာခဏ ဆိုသလို ကြည့်ရပါတယ်။ TV မပေါ်သေးခင်ကပေါ့ ။ ကျမမှတ်မိနေသေးတယ် ကျမရှစ်တန်းတက်တော့မှ TV က စပေါ်လာတာပါ။ အဲဒီထဲကမှ တချို့ ကို မှတ်မိပြီး နှစ်သက်တဲ့ အခန်းတွေကိုတွေ ပိုမှတ်မိပါတယ်။
အဟီး . . . တချို့ လဲ မမှတ်မိဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြား (တခါတလေ မြင်ခြင်မှ မြင်ရမယ်၊ တခါတခါတော့ အသံပျောက်တတ်တဲ့) TV ကြီးက ပြန်ပြီး အခါမလတ် နွေးပေးနေလို့မေ့မလိုဖြစ်လိုက် ပြန်ကြည့်လိုက်ရတော့ သတိရလာလိုက်နဲ့ ပေါ့။ ပုပ်ပါးမှာ ထပ်ဆင့်လွှင့်ရုံး ဆောက်ပေးထားလဲ တခါတခါ လိုက်ကာချထားလို့မကြည့်ရတာလဲ ရှိရဲ့…။
ငယ်တုံးက ရုပ်ရှင်ကြည့် သွားပြီဆိုရင် မေမေရယ်၊ အမတွေရယ် လူကများတယ်မို့ လား။ မေမေက ကျမအတွက်ခုံမဝယ်ဘူး၊ ကျမက ကလေးဆိုတော့ ထိုင်ခုံလက်တန်းပေါ်မှာ ထိုင်ကြည့်ရတာပါပဲ။ များသောအားဖြင့်တော့ DC တန်းကကြည့်တာပါပဲ။ တခါတလေ လက်မှတ်မရရင်တော့ အောက်ထပ် နောက်ဆုံးတန်းကပဲ ကြည့်ရတာပေါ့။ DC ကကြည့်ရင် တခြားတန်းတွေကတော့ ကျမအတွက် ပြဿနာ မရှိပေမဲ့ နောက်ဆုံးတန်းကဆိုရင်တော့ ကျမက လက်တန်းပေါ်ထိုင်ကြည့်ရတာ ဆိုတော့ ဆလိုက်ထိုးတဲ့ အပေါက်ကို လွတ်အောင်ထိုင်ရတယ်။ ကျမခေါင်းနဲ့ က ရုပ်ရှင်ဆလိုက်ထိုးတဲ့ အပေါက်နဲ့အတည့်ပဲ။
ဖလင်စက်မောင်းတဲ့ ဦးရဲလှက အိမ်ကလူတွေနှင့်ရင်းနှီးနေလို့ တော်သေးတယ်။ တခါတလေ အပေါက်နားလာပြီး ကျမနာမည်ခေါ်လို့ခေါင်းဖယ်ခိုင်းရတယ်။ ရုပ်ရှင်ပြလို့ မရလို့ လေ . . . :D
အဟီး . . . ရုပ်ရှင်ကြောင်းမရောက်တော့ဘူး။ ရုပ်ရှင်သွားရင် ကြုံရတဲ့ အမှတ်တရ အကြောင်းတွေဆိုတော့ ဒါတွေမပါတော့လဲ မပြည့်စုံဖူးပေါ့နော်။ ထိုင်ခုံဝယ်ရတဲ့ အရွယ်မှာတော့ သိပ်မကြည့်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ TV တွေ ၊ Video တွေက အသုံးများလာတာကိုး။
ပထမဆုံး သတိယမိတဲ့ကားကတော့ ရှင်ဥပဂုတ်ကားပါ . . . အဲဒီကားစပြတော့ ကျမတို့ မြို့ မှာမိုးရွာတယ်။ အညာနွေက မိုးရွာခဲတယ်လေ။ ထူးဆန်းတော့ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ ကလေးလေးကို နတ်သမီးက နတ်ရေကန်ထဲ ပစ်ချလိုက်တာက စမှတ်မိတယ်၊ ရေကန်ထဲက လူကြီးပြန်ထွက်လာတော့ နတ်တွေက ထီးမိုးပြီးရပ်နေကြတယ်။ အဟဲ နတ်ရေကန်ထဲ ကလေးထည့်လိုက်တော့ တန်းလူကြီးဖြစ်လာတော့ တာကိုး ၊ နောက်တော့ ဘုန်းကြီးဖြစ်သွားပြီး ပင်လယ်ထဲမှာ ကြေးပြသတ်နဲ့နေတယ်။ ဆွမ်းကိုလဲ နေကို ကြည့်လို့ ဘုန်းပေးတယ်။ ဆွမ်းလှူသူတွေက နဂါးတွ၊ နတ်တွေလို့ထင်တယ်။ ဒါတွေပြောနေတာ ဘာသာရေးကို ပြောခြင်လို့မဟုပ်ပါဘူး။ ဟိုတုံးကရုပ်ရှင်တွေက အဖြူ၊ အမဲနဲ့ ရိုက်တာတောင် ထူးဆန်းပြီး ကြည့်ရတာ အရသာလေးနက် အဆင့်မြင့်တာကိုသာ ပြောခြင်တာပါ။ ကလေးဆိုတာက ထူးဆန်းရင် သဘောကြတတ်တာမျိုးလို့ထင်တာပဲ။ :P
အဲဒီကနေ ဘယ်အခန်းမှတ်မိလဲဆိုတော့ ဘုန်တော်ကြီးတွေ လာပင့်ကြလို့ကုန်းပေါ်ကို ကြွလာပါလေရော။ အလှူပေးတဲ့ အချိန်မှာ ခဲမိုးတွေရွားလို့ရှင်ဥပဂုတ်တက မိုးပေါ်ကိုကြွလို့ မာနတ်နောက် လိုက်တာကိုး၊ မာနတ်နှင့် ရှင်ဥပဂုတ်တလဲ တန်ခိုးခြင်ပြိုင်သတဲ့ ဖန်ဆင်းတာတွေလဲ ပြတယ်။ ပြိုင်တိုင်း ရှင်ဥပဂုတ်တကသာ နိုင်တော်မူတယ်။ ဒါကလဲ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေပါပဲ။ နောက် မနိုင်တော့ မာနတ်ကထွက်ပြေးတယ်။ အဲဒါကို ဖမ်းပြီ ခါးပန်းကြိုးနှင့် စင်္ကြာဝဋ္ဌာတံတိုင်းမှာ ချည်ထားပါလေရောလား။ ခွေးသေကောင်ကို လည်ပင်းမှာဆွဲပေးထားသေးတယ်။
အလှူပြီးသွားမှာ ကြိုးသွားဖြေပေးတယ်။ မာနတ်က မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ တုံးက ငါကသာလုပ်ခဲ့တာ၊ ဘုရားရှင်က အမြဲခွင့်လွတ်တော်မူတယ်လို့တွေးတဲ့ အခန်းလဲပါတယ်။ အဲလိုလဲ ရှင်ဥပဂုတ်တကို လျှောက်တော့ တခါ ဘုရားကိုမြင်ဖူးချင်လို့ဖန်းဆင်ခိုင်ပြန်သတဲ့ ။ တူအောင်တော့ မစွမ်းပါ၊ အနီးစပ်ဆုံးဆိုရင်တော့ ဖန်ဆင်းပြပါမယ်လို ဆိုပြီ ဘုရားဆွမ်းခံကျွလာတဲ့ပုံကို ပြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဖန်ဆင်းထားတဲ့ ဘုရားကို ထိုင်မကန်တော့ဖို့အကြိမ်ကြိမ် ဂတိတောင်းတယ် ၊ ကန်တော့ရင် သူ့ အဖို့ မှာ ဒုက္ခရောက်ရပါလိပ်မယ် ဆိုပြီမှ ဖန်ဆင်းပြပါတယ်။ ရောင်ခြည်တော်တွေ တလတ်လတ်နဲ့ ကြွလာ တာ မြင်တော့ မနေနိုင်ပဲ ထိုင်ရှစ်ခိုးတယ်။ အဲဒီမှာပဲ မာန်နတ်ဟာ လွင့်စင်ပြီ စကြ်ာဝဋ္ဌာအုတ်တံတိုင်းနဲ့ခေါင်းဆောင့်တော့တာပေါ့။
ဒီလို အခန်းတွေကို ရှေးက Computer လဲ မရှိပဲ ဖြစ်အောင် ရိုက်ပြခဲတာလေ။ ဒါက ဗမာကားဟောင်း တွေထဲက တကား။ ဒီကားကိုတော့ TV မှာရော၊ ရုပ်ရှင်မှာရော ပြန်ပြတာ မတွေ့ မိပါဘူး။ ခုနေခါမှာ ရှင်ဥပဂုတ်တ ရှိတယ်ဆိုပြီး ပင်လယ်ထဲ ဖောင်လေးနှင့် နှစ်တိုင် ဆွမ်းတွေ မျှောတဲ့လူတွေ၊ အရပ်ဒေသတွေတောင် ရှိတုံးပါပဲ။ တချို့ တွေကလဲ မရှိဘူးလို့ဆိုတာပဲ . . .။ တချို့ သဘောသား လောကမှာဆိုရင် လပြည့်နှင့် ဗုဓ္ဒဟူးရတ်ထပ်ရင် သပိတ်မှာ ဆွမ်းထဲ့လို့ငှက်ပျောဖီးကြီး ကို အဖုံးလို အုပ်လို့ပင်လယ်ဝ သွားမျှောကြသေး . . . :P ။
ငယ်ငယ်က ပွေလီတာတော့ မဟုပ်ပါဘူး၊ ကြည့်ဘူးတာလေး ပြောရအုံးမယ်။ ဒါက ဟိုးတုံးက English ကားကြောင်း ။ ဘုရားပွဲဈေးတွေမှာ ကျမတို့ ငယ်ငယ်က ထူးဆန်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို ရုံသွင်းပြီးပြလိုက်သေးတယ်။
၃ကား တစ်ကျပ်ပေးရတယ်။ အဲဒီတုံးကလဲ ရုပ်ရှင် သွားကြည့်ရင် DC (အထက်တန်း)က ကြည့်မှ ၃ကျပ် ပဲပေးရတဲ့ခောတ်ဆိုတော့ ဈေးသိပ်မချိုဘူးလို့ ပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့် ကားတွေက တော်တော် ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတော့ ပေးရတာတန်ပါတယ်။ ကလေးတွေ ၂နာရီ၊ ၃နာရီ လောက်တော့ မထိန်းရတော့ဘူး။ ကလေးတွေပဲ ကြည့်တာကိုး။
ကျမရာယ်၊ ကျမအထက်က အမရာယ်ကို မေမေကလတ်မှတ်ဝယ်ပြီး ရုံပေါက်ပို့ ထားခဲ့တယ်။ နှစ်ယောက်မို့ တော်သေးတယ်။ ကျမဆို လှုတ်ရဲဘူး ကြောက်လို့ ။ မှတ်မိသလောက် ပြောရရင်တော့ ကျောက်ရုတ် အကြီးကြီး ပင်လယ်ဘေးမှာ ရှိတယ်။ အဲဒါကို လူတွေရောက်သွားတော့ ခြေထောက်မှာ ရှိတဲ့ အပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်တာ။ အဲဒီမှာ အသက်ဝင်လာတော့တာပါပဲ။ လူပိစိလေးတွေ အသက်လု ပြေးရတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ဟိုက အကြီးကြီး။ ရေးရေးပဲ မှတ်မိလို့အသေးစိပ်တော့ ရေးပြတတ်တော့ဘူး။
နောက်တကားက ခု တောင် Holly Wood မှာ ကြေညာနေသေး။ လူအကြီး ကြီးကို လူအသေးလေးတွေက ကြိုးနဲ့ တုတ်ထားတာလေ။ အဲလိုကားမျိုးက တစ်ကား။ ကင်းကောင်နဲ့ 
ဂေါ်ဇီလာကားက တစ်ကား။ ထူးဆန်းပြီး ကြောက်စရာကောင်းလို့ကြည့်တဲ့သူတွေ ငြိမ်ကုတ်နေတာပဲ။ ရုံထဲကထွက်လာမှပဲ ခေါင်းတွေ၊ ခြေတွေ ၊ လက်တွေ ဆန့် ရဲတော့တယ်။
ဒါတောင် အမပါလာလို့ ။ သူ့ လက်ကိုင် အကြပ်ကြီးကိုင်ပြီ ကြည့်ရတယ်။တစ်ယောက်ထဲဆို ရုံထဲတင် ရူးပါနေမလား မသိဘူး။ ဒါတောင် လက်နဲ့ ကာပြီး လက်ကြားထဲကနေ ချောင်းကြည့်တာ ။ ဟားဟား ဘာမှတော့ ထူးပါဘူး မကာပဲကြည့်တာနဲ့ ၊ အကာကြားထဲက ချောင်းကြည့်တာနဲ့ ။
နောက်မှပဲ ကြုံရင် တခြားရှေးက ရုတ်ရှင်ကားထဲက မှတ်မိတာလေးတွေ ပြောပြအုံးမယ်။ ဒါတောင် မျောက်ပွဲးတို့ ၊ ဆပ်ကပ် ဦးမောင်မောင်တို့ပြတဲ့ ကျွမ်းဘားကြည့်တာတို့ရှိသေးတယ်။ နောက်မှ ပေါ့နော် ။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 11:42 PM